Filannoo Keenyaa: "Nu warra bakka itti baqannu hin qabne daran hubuu danda'a" - BBC News Afaan Oromoo
Filannoo Keenyaa: "Nu warra bakka itti baqannu hin qabne daran hubuu danda'a"
Filannoo Keenyaa ija lammiilee Itoophiyaatiin
"Haalli filannoo amma jiru nama yaaddeessa," jedha magaalaa Naayiroobii naannoo Islii jedhamutti, daldala mana nyaatatiin ofii isaafii maatii isaa akka jiraachisaa jiru kan nutti hime Abbushaa Zarihuun.
Abbushaan gara Keenyaa kan dhufe xumura bara 2014ti.
"Gama mootummaanis ta'e gama mormitootaan sochiin jiru ana qofa utuu hin ta'iin koolu-galtoota dabalatee warra biyyaallee yaadeesseera. Daldalan of jiraachisuuf hojjedhu kana irratti dhiibba uumas kan jedhu sodaa guddaan qaba," jedha Abbushaan.
Qondaalli olaantuu Komishinii Filannoo Keenyaa Ameerikaatti baqatan
Hamma gareen mormituu fi paartiin biyya bulchu walii hin galletti nageenyi ni jiraata jedhee tilmaamuun na rakkisa kan jedhu Abbushaan, "kana irraa ka'uun rakkoon ni dhufa jedheen yaada, rakkoon akkasi immo nu warra bakka itti baqannu hin qabne daran hubu danda'a," jedha.
Sodaa fi yaaddoo jiru irraa kan ka'e yeroo ammaatti lammiileen biyyattii hedduun kan magaalaa Naayiroobi keessa hojjetanifi jiraatan, maatii isaanii waliin gara kutaa biyyaa itti dhalatanii deemaaniiru.
Baayeen isaanii kan deemaniif achitti filachuuf wayita ta'u, kaan immoo haala jiru sodaatanii kan baqatanii dha. Kunis daldala irratti dhiibbaa qabaachuu isaa dubbata Abbushaan.
"Osoo filannoon as hin dhihaatiin dura daldalli gaarii ture, galiin koos bareedaa ture. Amma erga filannoon as dhihaate jalqabee garuu daldalli haalaan qabbanaa'eera," jedha.
Kanaaf jechas hojjettoota isaa nama saddet irraa gara nama shaniitti hir'isuu isaa nutti hime.
Manni murtii olaanaa biyyatti bu'aa filannoo baatii lama dura gaggeeffame, kan Pireezidant Uhuuruun injifataniiru jedhame ega haqee booda, filannoon irra deebiin akka gaggeeffamu ajajee ture.
Ta'us dorgomaa paartii mormituu NASA kan ta'an Raayila Odiingaa hanga qondaaltonni boordii filannoo biyyatti hanga hin jijjiiramnetti filannicha irratti akka hin hirmaanne beeksisan.
Kanarraa kan ka'es rakkoon nageenyaa uumamuu mala sodaa jedhutu jira.
"Jeequmsa xixiqqaa uumamuu mala, wanti biyya kana hamaaf saaxilu ni jiraaata jedhee garuu hin amanu. Kanaafuu hanga haalli dirqisiisaa jabaan na qunnamuutti hojiikoo ittan fufa," ejjennoo jedhu qaba.
"Abjuu sodaa utuu hin rafiin hin bulan jedhe Oromoon," jechuunis jeequmsa sodaa hojii akka hin dhaabne nutti hime.
Haala filannoo Itoophiyaa
Abbushaan wayita Itiyoophiyaa keessa ture filannoo biyyoolessaa irratti qooda fudhaatee hin beeku.
Kunis waan umuriin isaa hin geenyeef utuu hin ta'iin filachuuf fedhii waan hin qabneef akka ta'e nutti hime.
"Namnin ani silaa filachuu barbaadu waan filannootti hin dhiyaanneef, hiikaan filannichaa naf hin galu ture," jedha.
'Keenyaan filannoo irra-deebii amanamaa ta'e gaggeessuu hin dandeessu'
Filannoo Keenyaa: Meeshaan sirni sagalee kenniinsaa filannoo lammataaf 'hin qaqqabu'